अमर प्रेमका कथा – Puleso
अमर प्रेमका कथा
१. रोमियो जुलियट
सेक्सपियरद्वारा लिखित ‘रोमियो जुलियट’ प्रेमसम्बन्धमा आधारित नाटक (ट्राजेडी) हो। सेक्सपियरले लेखेकामध्ये चर्चित नाटक हो यो। दुई प्रेमीको प्रेम सम्बन्धदेखि मृत्युसम्मलाई नाटकमा देखाउने प्रयास गरिएको छ। प्रेममा परेकै कारण दुई प्रेमीले सामना गर्नु परेको समस्या पुस्तकको मुख्य विषय हो।
नाटकमा रोमियो र जुलियटको चोखो प्रेमसम्बन्ध प्रेम–जोडीका लागि आदर्श नै भएको छ। इटालीको ‘सेटिङ’ रहेको यो नाटकमा रोमियो–जुलियटको प्रेमलाई अमर रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन्, सेक्सपियर।
२. डक्टर जिभागो
नोबल पुरस्कार विजेता बोरिस पास्टरनकको उपन्यास ‘डक्टर जिभागो’लाई क्लासिक उपन्यासको रूपमा चित्रित गरिन्छ। युरी जिभागो सन् १९१७ तिरको एक मेडिकल डक्टर र कवि हो।
तोनयासँग विवाहमा बाँधिए पनि ऊ लारा नामक नर्ससँगको प्रेममा पर्छ। यहाँ डक्टरको दुईतर्फी प्रेमलाई देखाइएको छ। डक्टर जिभागोलाई पहिलोपटक ब्राजिलमा १९५९ मा फिल्मी रूपमा देखाइएको थियो।
३. उद्रिङ हाइट्स
सन् १८४५–०४६ को बीचमा इमिली ब्रोन्टेले लेखेको उपन्यास हो, उद्रिङ हाइट्स। १८४७ मा प्रकाशित यो उपन्यासलाई ‘क्लासिकल’ पुस्तकका रूपमा लिइन्छ। अर्नसले एक ‘अर्फन’ बच्चालाई लिभरपुलबाट घर ल्याउँछ। उनी एक किसान हुन्।
बच्चाहरू हिन्ड्ली र क्याथरिनसँगै हिटक्लिफ पनि हुर्कँदै जान्छ। क्याथरिन हिटक्लिफलाई माया गर्छे तर हिन्ड्ली चाहिँ उसलाई देख्न पनि सक्दैन। सन् १८५० मा स्यार्लाेट ब्रोन्टेले यसै पुस्तकको दोस्रो संस्करण निकालिदिएकी थिइन्।
४. एन्ना क्यारेनिना
भनिन्छ, एन्ना क्यारेनिना लियो टोल्सटोयको उत्कृष्ट कृति हो। १९औं शताब्दीमा लेखिएको यो पुस्तकले रसियन समाजलाई गजबसँग उतारेका छन्।
रसियाको उच्च वर्गको ‘सेटिङ’ भएको यो पुस्तकमा, एन्ना क्यारेनिना आफ्नो भाइ स्टिभालाई भेट्न मस्को आइपुग्छे। त्यहाँ आइपुग्दा ऊ काउन्ट भ्रोन्स्कीको प्रेममा पर्छे। क्यारेनिना एक विवाहित महिला हो। एन्ना क्यारेनिनालाई विश्वमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने किताबको रूपमा लिने गरिन्छ।
५. द टाइम ट्राभरलर्स वाइफ
अउड्रे नेफिन्जरद्वारा लिखित उपन्यास ‘द टाइम ट्राभलर्स वाइफ’ले जीवन र प्रेमसम्बन्धमाथि आधारित छ। नेफिन्जरको यो पहिलो उपन्यास हो जुन सन् २००२ मा प्रकाशित भएको थियो। हेनरी र क्लेयरको प्रेम सम्बन्ध पुस्तकको मुख्य विषय हो।
उनीहरूको चोखो मायालाई पुस्तकले दुवैको दृष्टिकोणबाट उजागर गरेको छ। ‘मेन्टल डिसअर्डर’ भएको एक युवक ‘टाइम ट्राभल’ मा हिँड्नुपर्छ जसले गर्दा उसको श्रीमती चिन्तित छे। ‘द टाइम ट्राभलर्स वाइफ’ ले ब्रिटिस बुक अवार्ड’ समेत जितिसकेको छ। त्यस्तै, पुस्तकमै आधारित फिल्म २००९ मा सार्वजनिक भएको थियो।
संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य, गृहसचिवलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिको सुरक्षार्थ दैनिक काम-कारबाहीमा झन्डै ६ हजार विस्तृतमा...